Nandao ny Toerana Naha-Tonia Mpamoaka Vaovao Azy i Lauren · Global Voices teny Malagasy
Nandao ny Toerana Naha-Tonia Mpamoaka Vaovao Azy i Lauren
Voadika ny 10 Jolay 2018 4:53 GMT
Manana vaovao lehibe hozaraina aho. Taorian'ny dimy taona mahery naha-tao amin'ny efitra famoahambaovaon'ny Global Voices ahy, tamin'ny voalohany teo amin'ny andraikitra naha mpitarika ny soba-tonia ahy, ary avy eo tonia mpamoaka vaovao, fotoana izao ho ahy hikisahako hiatrika fanamby aminà asa vaovao indray.
Ny Zoma 13 Jolay izao no andro farany iasako amin'ny maha-tonia mpamoaka vaovao ahy ato amin'ny Global Voices, aorian'io dia handray andraikitra amin'ny fitarihana ny fitantaràna ao amin'ny Mobilisation Lab, tambajotra erantany misy ireo mpikarakara, mpikatroka ary mpikaroka miasa miaraka manandrana ireo fampiharana sy teknolojia izay manafaingana ny fiovàna sosialy.
Tsy mora tamiko ny naka izao fanapahankevitra izao. Manana ny toerany tsy afaka eo amin'ny fiainako ny Global Voices nandritra ireo fìto taona nanana ny lanjany, nanaovana fanamby, sy nahafinaritra, nanomboka tamin'ny 2011, fony aho nanatevina laharana nirotsaka ho mpandika an-tsitrapo Espaniola mankamin'ny Anglisy.
Toy ny efa niainan'ny maro hafa, vetivety foana aho dia tratry ny aretina Global Voices. (“Vondrom-piarahamonina fitantaràna virtoaly mampiroborobo ny fifandraisana sy fifankahazoana miampita ny sisintany? Omeo misimisy kokoa aho!”) Tamin'ny 2012 koa aho dia nirotsaka an-tsitrapo ho soba-tonia tao amin'ny efitrano famoahambaovao, namerina namaky farany ireo lahatsoratra alohan'ny hamoahana azy ireny.
Tamin'ny 2013, nakarina ho soba-tonia miasa aminà ampahan'ora aho mba hanampy ireo mpanoratra sy toniandahatsoratra hanoratra mazava tsara, misy tanjona ary mifanaraka tsara amin'ny vanimpotoana sy ny zavanisy.
Tamin'ny 2014, lasa tonia mpamoaka ny vaovao aho tamin'ny fotoana nandraisan'i Sahar ny toeran'ny talen'ny fanoratana, ary dia nahafaly ahy ny nisalotra io andraikitra io nanomboka teo. Ho an'ireo rehetra niaraka niasa tamiko nandritra ireo taona ireo, mivantana na tsia, tena nahatonga ny androm-piainako tsirairay ho toy ny vatomamy ho ahy nandritra io fotoana tsara io ireo hevitra avy aminareo, ny fifanakalozantsika ary ny fandraisanareo anjara.
Saingy araka ny tenim-pahendrena avy amin'i Nwach, mpitantana vondrom-piarahamonina ho an'ny tarika ao Afrika Atsimon'i Sahara, nambarany ahy tsy ela akory izay fa ny fiovàna no hany zavatra mitoetra maharitra. Isika ato amin'ny Global Voices dia samy mahita amin'ny fotoana iray tsy azo ialàna fa tsy maintsy manapaka hevitra momba ny hoavin'ny fikambanantsika — ahoana no fomba tsara indrindra handrindràna ny ezaka ataontsika mba hisy fiantraikany ao anatinà tontolo iray mihazakazaka be, feno tabataba sy mampididoza kokoa. Na izaho manokana aza dia nandalo fisaintsainana toy izany momba ny fiainako manokana, ary tonga tamin'ny tsoakevitra hoe tsara ho ahy io fiovàna io.
Toy ny hoe fanaovam-belona ny fandrenesana azy, saingy tsy izany io, mampanantena aho. Raha vao niditra ho GVer, dia GVer foana! Na niala tsy ho tonia mpamoaka vaovao intsony aza aho, dia hitohy hahita ahy eny amin'ny manodidina eny ianareo amin'ny maha-mpikambana ahy ato anatin'ny vondrom-piarahamonina, ary mahaliana ahy ny mijery izay zavabitan'ny Global Voices araka ny irosoantsika mankany amin'ny hoavy — miaraka.
Satria tsy mora ny zavatra taontsika eto, saingy manandanja kosa. Tara-pahazavana ity vondrom-piarahamonina ity rehefa injay misy haizina be mandalo. Tetezana sy maintsy ilaina hiampiàna ranomasimben'ny fisamantsamahana.
Nanitatra ny tontoloko ny naha-tato anatin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices ahy ary nanefy ahy ho mpihaino tsara kokoa, mpisaina tsara kokoka ary olon'ny fifandraisana. Nitety ny tontolo sy nahazo namana maro erantany aho — ireo rehetra ireo na dia tsy nivoaka ny trano aza. Afaka ihany koa aho nivoaka ny trano sy nahita maso ny sasany amin'ireo toerana no sady nihaona nivantana tamin'ny sasany amin'reo namana, tany aminà firenena valo tamin'ireo tanibe efatra.
Tsy hisy fetra ny aingam-panahy azoko ary ateraky ny hafanamponareo, ny fahalalinan-tsainareo, ny kiry sy ny fahaizanareo mamorona. Tena tombony nanova fiainana tokoa ny niasàna niaraka tamin'ny Global Voices, noho izany dia fisaorana avy ao am-po no atolotro anareo noho ny namelàna ahy hahatanteraka izany.
Am-pitiavana be, sy fankasitrahana ary fanantenana,
P.S. Manontany tena momba izay ho tohiny ve? Aza adino ny mamaky ity lahatsoratra ity, nosoratan'i Georgia sy Ivan.
2 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy